पैसाले कसरी यौन-जीवन बर्बाद गर्छ ? – दाङ खबर
पैसाले कसरी यौन-जीवन बर्बाद गर्छ ?
कार्तिक १४- हालैसालै भएका केही शोधले देखाउँछ, ‘पैसासँग जोडिएका विषयले मानिसको यौन जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।’वैवाहिक जीवनलाई सफल र सुखी कसरी बनाउने भन्नेमा धेरैले आफ्नै तरिकाले सोचिरहेका हुन्छन् । यसका लागि हेक्का राख्नुपर्ने चाहि के भने, सम्बन्धलाई पैसाको दबाबबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा थाहा पाइराख्नुपर्छ ।
जीवनमा पैसा महत्वपूर्ण छ कि प्रेम भनेर सोध्यौं भने संभवत कसैले पनि झट्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । जीवनमा दुवै चीजको आवश्यकता छ । अपरिहार्य पनि ।भुक्तभोगीहरु भन्छन्, ‘पैसा बिनाको प्रेम कुनैपनि बखत टुट्न सक्छ ।’ अर्को सत्य के भने, पैसा कमाउने चक्करले पनि प्रेम-सम्बन्ध बिगार्न सक्छ । अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न म्युचुअलले गरेको अध्ययन अनुसार वयस्कमा तनाव र दबाबको मुख्य कारण पैसा रहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।
पैसाको सबैभन्दा नकरात्मक प्रभाव उनीहरुको यौन-सम्बन्धमा देख्न पाइन्छ । यो शोधमा संलग्न १० दम्पतीमध्ये चारले पैसाले सम्बन्धमा भाँजो ल्याउने र यसले उनीहरुको सम्बन्ध खराब हुन सक्ने स्विकारे ।
कैयौपटक धेरै कमाउने लालचमा अफिसमा ढिलोसम्म बस्न बाध्य हुन्छन् र जब घर पुग्छन् त्यतिखेर उनीहरुको मन र शरीर थाकिसकेको हुन्छ ।उनीहरुको सबै उर्जा भविष्यको प्लानिङ र ओभरटाइममा चल्छ । यसपछि आफ्नो पार्टनरसँगग पे्रेम र कुराकानी गर्न उनीहरुलाई समय मिल्दैन ।
रिलेसनसिप कोच किम अनामी आफ्नो ब्लगमा लेख्छिन्, ‘धनी बन्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो यौनसम्बन्धलाई राम्रो बनाउने ।’यस्तो लेख्नुको पछाडि उनको तर्क छ, ‘यौन उर्जा व्यक्तिको कि्रयटिभ इनर्जी हो । यसैले नयाँ जीवनको रचना हुन्छ । यौन अभिव्यक्ति र आर्थिक स्थितीको आपसी सम्बन्ध धेरै गहिरो छ ।’
मानिस आफ्नो यौन उर्जासँग जति कम्फर्टेवल हुन्छन् त्यति नै जीवनका अन्य विषयमा पनि सकरात्मक बन्न सक्छन् । किम आफ्नो कोचिङको क्रममा मानिसहरुलाई यदि उनीहरु आर्थिक निराशासँग जुधिरहेका छन् भने आफ्नो यौन जीवनमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सल्लाह दिन्छिन् ।
Prevसुदूरपश्चिममा स्क्रब टाइफस : दुई जनाको मृत्यु , ५० जनामा संक्रमण
Nextलागूऔषधसहित पाँचजना पक्राउ
देशकाे केन्द्र काठमाडाैँमा दिउँसै चोरी : सुरक्षा सतर्कता
बागलुङको ढोरपाटनमा आगलागी, ३० घर जले